Halyeeyadii Hiilka Waayay Waayihii Noloshoda & shekadii N/ Hure Shuruud Q. 4-aad. | ogaden24
Halyeeyadii Hiilka Waayay Waayihii Noloshoda & shekadii N/ Hure Shuruud Q. 4-aad.
Nov 3, 2018 - Aragtiyood
Waxay maraysay markii aan nimid xabaashii sadexdii mujaahid xiliguna waa duhur sidaan sheegnay waxaanu qaybsanay difaaca waxaa ii yimid halgamaa Aamiin Hassan Arte (Amiinyakhay).
Wuxuuna igu yidhi labada wiil reerka biyo haynoga sooqaadaan waan oomanahaye waxaan ku idhi haye walaal wiilashii way dhaqaaqeen reerkuna sidaas uma fogaynba waxaan ku idhi is ilaaliya walaalayaal waxay dheheen haye walaaale.
Wiilashii way raageen waxaan la hadlay walaal Aamin waxaan idhi walaal maxaa dhacay wiilashii way raageen wuxuu yidhi haa way raageen waan sugaynaa walaal hadana waan sugnay waxba waan waynay tanaaba hadana cajiib kale nagu noqotay wax xabad ahna maanaan maqal inkastoo cadow aad u jiray.
Waxay noqotay casar caawana waxaan ka balansanahay barkulankii aan usoconay aniga iyo walaal Aamiin waan kacnay xogaa wiilashii ayaan fiirfiirinay reerkiina waan waydiinay laakiin kumanaan guulaysan illaahay amarkii.
Waxaan u dhaqaaqnay bartaas iyo barkulankii waxaan gaadhnay amin fiid ah meeshii oo lana yar tiigsaday waardiyihii ayaa najoojiya afgarasho waan sheegnay uu nasiidaayay durba intii fiidnimo waan kala warqaadanay waxaan is waydaarsanay qolo waliba waxay war haysay kadib waan kala hawl qaybsanay.
Warbixintii waxaa lakeenay inuu halgamaagii aniga aan iswaynay oo nabada uu ciidankii u yimid oo isaguna markay xabadu nagu billaamantay uu aniga dhanka kale iga raadinaayay maadaamooy habeen ahaydna markii uu i wayay uu qiimaystay inaan dhintay sidaasna isaga baxay nabadna ku gaadhay ciidankii kuna warbixiyay Bashir inuu dhintay ayaan u badinayaa.
Iskusoo wada duub hada waxa maqan waa N/hure Shuruud oon wali war rasmi ah laga haynin waxaa israacnay Aniga iyo sadex halgamaa oo kale waa N/hure Arbe iyo N/hure sh yuusuf iyo N/hure hada aanan haynin magaciisa oo dhab ah laakiin hebel boosaaso umbaan ka xasuustaa.
Waxaa lanoodiray inaan raq iyo ruux keeno N/hure Shuruud waan dhaqaajinay maalinkii dambe ayaa waxaan maqalay islaanbaa tidhi waxaan arkay wiil jabhad ah oo dhaawac ah oo kaligii meel socda oo xabadi gacanta kagataalo oo raandheer leh waa nin cas adigu waxay bixisay wuxuu tilmaan lahaa Shuruud.
Waxaan baadi goob u galay inaan helno mamadaas warka keentay ee khayrka qabta waxaan raadinaba markaan kudhawnahay een waydiinay dadkii yaqaanay waxaaba layidhi maamadu way masayrsantahay oo wax ka qorisba male war anagaa yaab aragnay farxadii way nagu gudhay waana kasii daynay.
Intaanu maalinkii soconay labo jeer ayaan cadowga is hujuunay laakiin wax dhib ah maanaan lakulmin Alxdullillaah waxaan idinka ilaabay hawlgalka socdaa waa hawlgalkii Mulukeeto marmarka qaar waxaad isdhihi malaha geedahuba waa wada ciidan badnida.
Habeenkii sadexaad ayaanu nimid tuulo yar oo layidhaado Xaraareey qolyo dhalin yar ah ayaanu waydiinay wax ciidan jabhadeed ah markaas waxaa dhulkaas ku kala rogmada labo qaybood markaas anagu waan ku cusub nahay deegaankan qolada kale ayaa iska leh waxay noosheegeen inuu caawa nin jabhad ah la balansan yahay oo qaybtanada ah.
Waxaanu nidhi waa kuma waxay dheheen waa N/hure shugri Hassan Fidhi (Shugri ilbir)Naxariistii jano illaahay haka waraabiyo markaas waa Abaanduulaha qaybtanada laakiin uu cusub yahay wuxuuna fasax dhaawac ah ugu maqnaa wadanka dibadiisa laakiin markaas waxyar ayuu qaybta joogaa waxaan filayaa inay dadbadan garanayaan geesigii reer Ogadenia mujaahid ilbir Allaah yarxam wuxuu ahaa qalbi-dhagax2.
Waxaanu u sheegnay markuu u yimaado inay u sheegaan inaanu anaguna dhankaa kale magaalada ka joogno magacyadaasna lanadhaho sidii ayay yeeleen kadib waanu isunimid kala war qaadasho wuxuu noo sheegay inuu hayo Shuruud dhaawacna yahay shuruud wuxuu marayaa almost two weeks.
Walina mahelin daawo iyo kabis daaye xataa dhaqmo gacantii oo lafaha qaar daateen iska hurgumooday xanuun iyo dhiba uu dhamaystay hadana waxaan makhraati ka ahaa inuuna wajigiisa ka muuqan qof dhib hayasto uu iska faraxsanaa khayr allaah hasiiyee.
Waan israacnay ilbirna waa ku farxay runtii aragtidanada guud ahaan gaar ahaan aniga maadaamoo wax iiga bilownaa caafimaadka ama markaas aan ahaaba caafimaadka guud ee qaybta runtii wixii markaas aan kula tacaali lahaana dhaawaca halgamaagana waan wataa haday dawo tahay ama wax lagu dhaqo ama kabisba inkastoo too late ahayd xaalkiisu.
Aroortii ayaan guda galay wax ka qabashada dhaawicii mujaahidka markii aan dhameeyay hawshii waxaan ku tashanay inaan la aado meel aan ku dhakhtariyo halgamaaga waxaana i raacay sadex wiil oo uu kamid yahay Abaanduule Shugri ilbir iyo N/hure Aadan Abdi Shaafi (Adanqodhon)
N/hure taxliil waxaana aadnay meelkamid ah dhulkeenii barakaysanaa oonu isla cayinay.
Intaanu dhaxda siisoconay ayaan aragnay odayaal meel socda bariido kadib markaas waan qarinaynaa halgamaaga gacantiisa waayo waa halis cadowgu haduu maqlo dhaawacba uu kaasoo daba goojin illaahay amarkii markaasu Shuruud yidhi niman kani waa reekayagii midna waa Aabbo midana waa adeer.
Kabacdi way isbariidiyeen malaha odayguna khayro khayrodii iyo inuu mujaahidku dhaawacmay uu maqlay iyo mooyi runtii bariido kadib waa beere Aabo wuxuu yidhi haydhaafinina ee caawa reerka jooga waan ka yeelay wuxuu u qalay ri aad u wayn wuxuuna ugu soo habeeyay joog raashin dadkeenu dhaawaca siiyaana khiish ayuu kasoobuuxiyay.
aroortii intuu dameer soosaaray ayuu dhahay meeshaan gayn lahaa ii sheega waan u sheegnay hadal iyo dhamaantii shuruud uu bagsaday alxdullillaah laakiin mardambe oon is aragnay waxaan arkay gacantii oo uu beelay wuxuuna iisheegay in xabad dambe isla halkii kaga dhacday una helin kabis sidaasna kunaafatay laakiin ku qanacsan yahay maadaamoo walaaladeen intii badnayd shihiiday.
Wabillaahi towfiiq intaas ayaan ku dhamaynaynaa sheekadii lixda qaybood ahayd hadaan wax khalad ah sameeayay intaan sheekada waday igaraali ahaada sxbayaal inshaa Allaah waxaynu ku kulmidoonaa sheekooyin kale oo cusub.
Waxaa Qoray: Bashir Gelle